सबैको प्रमाणपत्र विदेशी: एसपीका भाइदेखि नेताका बुहारीसम्म नक्कली डाक्टर ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
सबैको प्रमाणपत्र विदेशी: एसपीका भाइदेखि नेताका बुहारीसम्म नक्कली डाक्टर !
काठमाडौं । प्रहरी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हालसम्मको अनुसन्धानमा देशभरि करिब दुई हजार नक्कली चिकित्सक कार्यरत रहेको रहस्य खुलेको छ ।
सबैको प्रमाणपत्र विदेशी